Xukumadda Soomaliya oo mamnuucday isku imaatinka dadweynaha . – iftiin fm
Xukumadda Soomaliya oo mamnuucday isku imaatinka dadweynaha .
Dowladda Soomaliya ayaa manta mamnuucday isku imaatanka xilli kiisaska cudurka Coronavirus ee Soomaaliya uu kordhay.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo manta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya marnaba ogolaneyn isku imaatin, xilli kiisaska cudurka Coronavirus ee Soomaaliya uu kordhay.
Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa sida oo kale sheegay in dowladda ay mas’uul ka tahay dadka Soomaaliyeed badbaadadooda, isla markaana siyaasi dano gar ah leh uusan isku soo bixi karin waa sida uu hadalka u dhigay.
← Daneyayaasha waaxda waxbarashada oo baaq uu direen maamulayaasha iskuulada.
Weerar ka dhacay koonfur-bari dalka liibiya. →